FILOHA RAVALOMANANA : TSY MANAIKY IO FIFIDIANANA IO ISIKA – MyDago.com aime Madagascar
FILOHA RAVALOMANANA : TSY MANAIKY IO FIFIDIANANA IO ISIKA
Lava dia lava ny kabarin’ny filoha Ravalomanana Marc teny amin’ny Magro Behoririka androany raha niditra mivantana tamin’ny antso an-telefaonina izy, naharitra t elopolo minitra izany. Fotoana izay efa nomeny ilazany ny fizotry ny raharaham-pirenena amin’ny vahoaka mpanaradia azy. Vory lanona tanteraka ireo olona tonga teny an-toerana niandry izay lahateniny izay. Toy izao raha fitinina fohy izay lahateniny izay. Tonga amin’ny fotoana tsy maintsy ilazana aminareo ny zavadehibe sy ny zavamisy hoy ny filoha Ravalomanana ny tenako. Tonga eto ianareo ary hiresaka aminareo mivantana aho amin’ny fahasamihafan’ny fomba fijery, ny fomba fahitantsika ny toe-draharaha eto Madagasikara. Ao dia ao tokoa hoy izy ny tsy fitoviam-pijery amin’ny fomba fitantanana, izay iarahantsika mahita tsara fa manjary ny olona entina indray no mitsikera ny mpitondra. Araho tsara ary henoy tsara hoy izy mba hahafantsika manaraka tsara ny zavamisy. Izany akory tsy hanafoana ny fifampitokisana misy na ny fifanajana nifampitondrana hatramin’izay. Mampiaiky an’izao tontolo izao hoy izy ny movansy Ravalomanana, manana ny maha izy azy ary mahafantatra tsara ny fandehan’ny raharaha, ny fijoroana amin’ny fahamarinana, ny ara-dalàna ary indrindra indrindra ny fampisehoana fa manankina amin’Andriamanitra ny fiainan’ny movansy sy ny firenena. Aoka hoy ny filoha Ravalomanana mba hanaja sy hanaiky ny zavatra rehetra izay nekena fa tsy sanatriavin’ny vava ho entina amin’ny fihatsarambelatsihy. Fantatro ary tsapako hoy izy fa misy dia misy ny disadisa ary tsy misorona aho raha miteny, tsy nihafihafy nanambara ny zavatra nisy fa dia anjaran’nytsirairay no mitsakotsako. Mahita aho hoy izy fa ampy ny fifampitenenana nisy. Samy mandinika lalina dia lalina hoy izy ary efa nilaza taminareo aho tamin’ny heriny fa ampahafantatra ny fivoriana izay nihaonako tamin’ireo delegasiona.Vita soamantsara hoy izy ny fivoriana na dia niezaka be aza, na dia mbola tamin’ny 12ora alina niasa foana. Ny zavatra voalohany noresahina hoy izy dia hoe aoka hihavana isika, hifamela, hibebaka amin’izay tsy nety natao. Misaotra an’Andriamanitra ihany koa hoy izy fa dia nisy ireo izay tonga taty nanatevina sy namaly ny antso ny amin’ny hanao fampihavanana. Nisy sy ireo kandidà sy olon-tsotra izay samy nahatsiaro fa fotoana izao tokony hihaonana mba hitondranay ny hetahetanay ary indrindra ny tso-dranonao. Ny tso-drano hoy ny filoha Ravalomanana dia tsy mandehandeha ho azy fa mila mihavana aloha isika, mila mihavana ny zanak’i Dada. Hitako ho sadaikatra ihany hoy izy kanefa marina ny zavatra nolazaiko dia nanaiky, toy izany koa ny delegasiona izay nilaza fa aoka ianao handray fanapahankevitra.
Tsy misy izany fanapahankevitra raisiko izany fa tsy misy afa-tsy ny mifampiresaka ary tena hifanazava, ilaza ny ao am-pony ka tsy itako izay tokony tsy hihaonana. Misaotra an’Andriamanitra isika hoy izy fa tafahoana, zavadehibe izany ary hendry ny zanak’I dada. Tsy maintsy mihaino ny hafa isika hoy izy, fa olombelona toy ny olombelona, izay tsy maintsy misy foana ny tsy mety, tsikera, fanaratsiana, fanenjehana. Faly aho hoy ny filoha Ravalomanana milaza aminareo eto amin’ny Magro fa zavadehibe sy dingana lehibe no vita tamin’izay fampihavanana izay. Tsy misy fanapahankevitra noraisina tamin’izany hoe hanohana iry na iry fa mihavana aloha. Misy mandika vilana indray ny sasany hoy izy, ka aoka ny tena marina no resahina. Tsy nisy delegasiona hafa noraisina izany fa zanak’i dada no noraisiko taty. Rehefa miresaka isika hoy izy indrindra fa ianareo mpitarika dia mifanatona, mifanazava ary mihaino tsara mba hahafahan’ny olona fa tena atokisany ianao, milaza ny zavatramisy. Tsy maintsy ataontsika hoy izy ny mifampiresaka mba hahafantaran’ny olona sy ny vahoaka mitolona amin’izao fotoana izao fa mila mahalala ny zavamisy izy. Rehefa nilaza taminareo aho hoy izy tamin’ny heriny fa hiresaka aminareo dia hiresaka aminareo fa tsy fitahana ny vahoaka. Vita ny fampihavanana hoy izy kanefa mbola ao ihany ny eritreritra mandeha etsysy eroa hoe inona no fanapahankevitra, ahoana no lazain’ny dada androany, izay no tohanana na tsy tohanany. Tsy ny fitiavana an’I ranona na ranona hoy ny filoha Ravalomanana no handrasaina fanapahankevitra fa miainga amin’ny zavamisy sy izay mahaso any vahoaka. Samy mihevitena ho manana ny marina hoy izy aryao nysasany mampiasa ny fifandraisana, na izay hahafahany mandresy lahatra. Tsy handaitra amin’i Dada mihitsy izany hoy izy fa i fDada mahalala ny zavamisy ary mijery ny zavatra tena jereny. Tsy maintsy mahafehy tsara ny zavatra heno etsy sy ero ary tsy maintsy mifandray tsara ny zavatra noresahiana tamin’ny delegasiona, ny fivoriana ny Sadc, ny taratasy nataoko tamin’ny filohan’ny Sadc, Sg ny Sadc. Tsy maintsy manaraka sy mihaino tsara ny vaovao farany hoy izy izay vao manapankevitra. Izao hoy ny filoha Ravalomanana ny fandehan’ny resaka tamin’ireo taty an-toerana, izay nihaona tany Addis Abeba. Tena hitantsika hoy izy fa samy manao izay saim-pantany ny fikambanana iraisam-pirenena ireto. Nanoratra taratasy faran’izay tena masiaka aho hoy izy ary nanaoratra izany nilaza ireo lehiben’ny Sadc. Raha fintinina amin’ny teny tsotra dia izao hoy izy nandritra 4 taona sy tapany ny fahasahiranana vokatry ny krizy teto Madagasikara noho ny fanonganam-panjakana toa tsy henonareo aty amin’ny Sadc aho kanefa mpikambana feno ao I Madagasikara. Tamin’ny volana desambra lasa teo 2012, nandresy lahatra ahy ianareo indrindra fa ianao prezidà, mba ho soa ho an’ny malagasy, aoka mba tsy hisy hirotsaka ianaro. Tena nanaiky an-tsakany sy an-davany ny tenako hoy ny filoha Ravalomanana, kanefa ankehitriny dia toa apetrakareo fotsiny eto aho. Ny vahoaka malagasy toa very fanahy mbola velona, heo aiza ihany i Dada. Noho izany dia miangavy anao aho mba hampiantso ny filohan’ny Troika hanao fivoriana maika. Misaotra an’Andriamanitra hoy izy fa talohan’ny niantsoko anareo izao dia hivory ry zareo amin’ny Talata sy Alarobia izao. Ny antony hoy izy dia tsotra ny nolazaiko hoe ianareo ve mba mahalala ny fanapahankevitra noraisin’ny Gic tany Addis Abeba, sy ny fanesorana ny sazin’ireo 109 ireo.
Ny nifanarahantsika dia hoe rehefa vita ny fifidianana vao foanana ny sasany. Amin’izao fotoana izao dia notsoahanareo izany. Gaga hoy izy ny filoha Tanzaniana fa tsy nahala izany. Averiko aminareo hoy ny filoha Ravalomanana fa mbola misy ny fanantenantsika fa aza matahotra ianareo. Ny zavatra noresahiko taminy ihany koa hoy izy dia hoe jereo tsara io fanontana biletà tokana io fa io no mahamaika azy ireo, ka hilaza izy ireo fa efa vita io.Tamin’ny voalohany nilaza fa tsy mbola vita ny biletà tokana raha tsy miala ireto kandida sasany ireto. Ny navaliko azy hoy izy dia hoe any aminaymisy ny azo ivalozana sy tsy azo ivalozana araka izay mety amin-dry zareo. Tsy mitsahatra mihitsy aho hoy izy manao izay rehetra azo atao. Fantatro fa ary hitako fa ingahy Chissano fa ny iraka nampanaovina azy dia ny hanarakasy hanatanteraka ny tondrozotra, na hanao tey vay manta tsy maintsy atao ny fifidianana. Milaza ny hevitro aho hoy izy fa manaja ny fanapahankevitry ny Sadc ary ao anatin’io vanimpotoanan’ny orana izany hanaovana fifidianana izany ary alohan’ny krismasy satria ny ankamaroan’ny vahoaka malagasy dia kristiana ary na tsy kristiana aza dia miara mankalaza aminay izany ka tsy mety ny dimy alohan’izany. Tsapako hoy izy fa toa tsy mahalala ny zavamisy marina ry zareo. Mangatala amin »Andriamanitra isika hoy izy mba hotanteraka soamantsara io fivoriana io, mba mahita ny fanapahankevitra noraisina tany Addis Abeba. Tsy nisy hasiny mihitsy hoyizy ny mahamalagasy fa izay saim-pantany ihany no nataony. Tsynihaino na dia kely akory aza hoe tsytokony mahamaika io fifidianana io satria tsy mahasoa ny malagasy.Misytena manosika sy manilika ao. Azoko sary antsaina hoy ny filoha Ravalomanana fa ratsy dia ratsy amin’ny vadiko, neny ny fanilihana azy tsy ho kandidà, aryhitako fa ianareo dia nanao izay azo atao nanohanana azy kanefa dia ireny no nafitsony. Tsy mifanandrify amin’ny iraka nampanaovina azy hoy izy ny nataon’ingahy Chissano fa nyheviny manokana. Nisy dia nisy tokoa hoy izy ny fihaonako tamin’ireo olona izay nangataka tso-drano sy ny fiarahamiasa. Tsy manosi-bohotanana anareo izahay hoy izy fa vonona iarahahiasa aminy ny tenako, fa asakasaky izay hamotika ny fananako.Azonareo hanontaniana manokana hoy izy nyminisitry ny fambolena fa ny tenako no niresaka mivantana tamin’ny talen’ny FAO ,nandrindra sy nandamina ny fihaonany ka nahazoana ireny fanampiana amin’ny valala ireny. Tena sahirana hoy izy ny ray amandreny amin’izao fotaonaizao, tsy mianatra ny ankizy ary ireo nalefa any ivelany aza naverina izay mafy dia mafy tokoa izany. Efa namerimberina teto aho hoyny filoha Ravalomanana fa tsy mety raha tsy eken’ny rehetra ny fifidianana rehetra izay atao.Tsy ekenstika io fifidianana io , lavintsika io fifidianana io.Tsy metyamin’ny vahoaka malagasy io. Hitantsika tsara anefa hoy izy fga misy ny tery vay manta ataon’ny sasany, ataon’ny mpikambana ao amin’ny firenena mikambana. Tsy misy mihitsy ve sahymijoro hoy izy hoe manana ny fiandrianampirenenay, ny lalàm-panorenanay izahay fa izay tiany atao no atao. Ny fikambanana iraisampirenena sasany hoy izy tsy mahalala akory fa izay zavatra entin’ingahyChissano ary no entiny miverina any, aryny androatokony tsy marina. Tandremo hoy ny filoha Ravalomanana fa isika dia toy ny fianakaviana iray. Niresaka naharitra tamin’ny filoha teo aloha Ratsiraka sy Zafy Albert aho hoy izy antelefaonina hoe inona no zavatra ataontsika fa tsy rariny loatra izao.
Mahafantatra izy ireo fa tsy afamanoatra noho nyafitsikony fikambanana iraisam-pirenena. Aza manome tsiny fikambanana iraisam-pirenena rehetra ianareo fa vitsy kely ireo mangalatra ny anaran’ny iraisam-pirenena ireo. Raha ho teren’izy ireo tsy maintsy hisyny fifidianana dia ho avy amin’izay izyireo ilaza hoe ianareo no sakana. Minoa ahy ianareo fa tsy maintsy mijoro isika mampiseho fa izahay tsy matahotra io fifidianana io, fa mahareta kely ianareo satrai mbola nahazo telo andro indray aho. Misy feo mandehandeha anyhoy izy satria efa intelo Chissano ono nilaza zavatra tsy marina hoe efa vita ny biletà tokana. Tsy marina izany fa izaho aty Afrika Atsimo no mipetraka manaramaso io.Mihevitra izy ireo hoy izy fa tsy misy mpitarika intsony rehefa tsy eo ny filoha Ravalomanana ka samy manao izay saim-pantany, raha vao miteny ry zareo hoe asiana sazy. Izaho hoy izy tsy matahotra izany sazy izany. Tsy rariny io fifidianana ataon-dry zareo io. Izao no zavatra mety hitranga hoy izy raha teren’izy ireo atao ny fifidianana, na ianareo any, dia samy maneho am-pahibemaso ho ren-tany ho ren-danitra ho hitan’ny vahoaka, manohitra ny io fifidianana io fa tsy mety aminay malagasy. Ianareo no mahalala heo izao no fandehana prezidà, tsy hamelantsika io fa tsy ekentsika.Nahoana ny zavamisy an’i Syrie na toerankafa afaka milahatra maneho ny heviny ny olona koa nahoana no aty amintsika no hampijaliana toy izao ny olona. Samia ianareo hoy izy sahy mampiseho izany , ianareo tsy hanimba zavatra, tsyhamono olona sanatria fa haneho hevitra ankalalahana, koa inona no manakana anareo tsy hanao izany. Raha vitanareo izany dia maneho tsy fankasitrahana hoe tsy mety io, manantena aho hoy izy fa azonareo ny tiako lazaina.Ny faharoa hoy izy dia raha ohatra ka tsy maintsy misy io, dia ilaza aminareo aho hoe eny ary , tsy isika akory no sakana, na hanao izay tsy hahatanteraka ny safidim-bahoaka.Ianareo dia tsy maintsy manaraka ny toromarika, ary rena hiray hina, hanao izay hanatanteraka ny tena safidim-bahoaka demokratika. Efa nanao ny asako taty aho hoyizy ny 90% fa ny 10% izay fanilikilihana izay no tsy voafehinay taty. Ianareo mpitarika izay miseho hoe izahay no lehibe, ianareo aza mihevitra fa tsy manana ny feon’ny ireo vahoaka ireo fa manana ireo, mahafantatra ny zavatra ataony izy ireo.
HENOY ETO NY FEO : http://k002.kiwi6.com/hotlink/i7p0jkgvhi/vm_07-09-2013.mp3
Auteur Solo Razafy*Publié le 7 septembre 2013 7 septembre 2013 Catégories Politique
19 pensées sur “FILOHA RAVALOMANANA : TSY MANAIKY IO FIFIDIANANA IO ISIKA”
Ny tsy azoko ry DADA , dia tsy asianao resaka mihitsy ireo hoe, resaka MAFIA anie no ataon-dry chissano.
Ary tsy asianao resaka ny frantsay, sa tsy te hitsikera ny frantsay ,na matahotra sao vonoiny ianao no tsy miresaka fa ny frantsay no fototry izao mahazo ny firenena izao.
Maninona moa ianao ry DADA raha manoratra any amin´ny Filoha amerikana, sy ire firenena hafa , tsy manaiky ny fanonganam-pnajakana na tsy miray tsikombakomba amin´ny Frantsay.
Ny gouvernemanta allemand izao, tsy mahalala ny marina, fa izay resahin´ny frantsay aminy no ekeny sy inoany.
Ka tokony sokafana ny mason´ireo firenena matanjaka hafa.
Raha izay troika, sy SADC, mano cinémá ireo fa efa vovavidin´ny frantsay, ary tsy homba anao mihitsy ry DADA. afrikana matim-bola sy mivarotra tanindrazana ny ankamaroany.
Tokony nagatahinao ,aloha ny fandravana io tetezamita mamofady io, satria ny fototr´io dia fanonganam-panjakana sy famonoana oloa,
tokony angatahinao, ny fisamborana an´i andry rajoelina sy ny forongony.,
Tahaka ny manaiky azy hijanona eo koa i DADA , fa raha mbola eo io Rajoelina sy ny forongony dia miaro azy foana ny Frantasya.
arodano aloha rajoelia, samborina, torina eranízao tontolo izao handefasana taratasy, satria mpanongam-panjakana, tsy mnanaja ny sonia nifanarahina sns,….
Tokony torianao koa ireo filoham-pirenena frantsay sy afrikana izay miaro azy sy miray tsikombakomba aminy. Izay no ady tokony atao,, fa raha miady anefa avela hijoro ny fahavalo sy ireo mpiaro azy, toa mbola ho ela ny fandresena .
aiza ny Cour internationale, ny CPI , tsy hay intsony ,hoe ireny koa ve tsy mamaly. marina fa miady mafy koa ny frantsay ,hiarovana ny tombontsoany.
izao fomba filaza izao dia tara be loatra. Efa 4 taona no tokony nihetsika ilay vahoaka fa sady tsy tsy nampirisihina no tsy navela.
Ka io ary ny feu vert, dia andao ary dorana amin’izay ny tanàna hanaovan’i dj sy ny tariny tongotra an-katoka . Avy eo manadamina vaovao isika tsy misy fahatsiarovana manaram-penitra.Ka rahoviana ary ny andro ?hiandry ny kabarin’i Ra8 indray ? afaka firy taona ?
7 septembre 2013 à 21 h 35 min
Mazava ny nolazain’ny filoha: Ampy izay ny fivoriana Magro. Ka vonona ve isika ? Vita izay ny fanekena be ambokony. Nilaza izy fa tsy matahotra an’izany sazy izany. Ka iza amin’ireo mpitarika ireo no afaka hiteny an’izany hoe tsy matahotra ny sazy mety hataon’i Rajoelina eto ?
Tsy ekene io fifidianana io no sora-baventy entina manao mita-be manomboka izao.
Alefaso ary ny bouche á oreil dia tonga dia aparitaho eto amin´ny intrenet dia andao hiaraka hanao rodobe.
ireo minisitra avy ao amin´ny mouvansy Ravalomanana no mitarika sy manao modely, ,tonga dia akatony ny birao dia tarito ireo mpiasan´ny ministeranareo, hatrany ambony ka hatrany ambany ka hatrany amin´ny faritany, rehefa manome baiko ve ianareo tsy hanaraka reo olona ireo.
I Mamy Rakotoarivelo, mitarika ireo CT izay te hanaradia azy koa.
Alefaso moramora ny hafatra ho an´ireo miaramila leo, y te hanaraka ny ara-dalana, dia tongava maro hiaraka hanao rodobe an-dalambe.
Ny mpiantra ambaratonga ambony, ny mpiasan´ny fahasalamana, ireo ben´ny fokontany mbola tsy nahazo ny tambin-karamany tsy nahazo.
blocage administratifs, alaivo i omer beriziky ka taomy hanaraka ny vahoaka,
ireo namana mpiandry gadra na penitentiers izay nanao grevy teo, ilazao hamoaka ireo moanao gazety sy miaramila, nigadra tamin´ny tsy rariny.
Atambaro ny hery dia asi action, fa ela loatra
8 septembre 2013 à 6 h 11 min
« Nahoana ny zavamisy an’i Syrie na toerankafa afaka milahatra maneho ny heviny ny olona koa nahoana no aty amintsika no hampijaliana toy izao ny olona. Samia ianareo hoy izy sahy mampiseho izany , ianareo tsy hanimba zavatra, tsyhamono olona sanatria fa haneho hevitra ankalalahana, koa inona no manakana anareo tsy hanao izany. Raha vitanareo izany dia maneho tsy fankasitrahana hoe tsy mety io, manantena aho hoy izy fa azonareo ny tiako lazaina. »
Mazava be,fa tokony hidina an-dalambe ny vahoaka, hampiseho an’izao tontolo izao ny tsy fanekentsika ny tery vay manta ataon’ny vondrona iraisam-pirenena, izany hoe ny FRATSAY.
Izay lay niandrasana atrizay, Lasa izao,MITSANGANA RY TANORA HOY NY MDRM SY NY ZANAKI DADA.
Naniry ndray ngamba ny volotongotra s volombavan’y dada8 … dia napiriminy ny akanjo fahitany teo anoloan’Ambotsirohatra taloha, DIA LASA NARAHANY!!!Sarimbavy tena izy io an!!!
Mba lehilahy amizay lesy dada8 ah, refa vonona ialahy zahay vonona, apahafirin’ny 1991 teny mavoloha, sy 2002 zay itranga eo, miomana aloha zay tratarnay eo fa …. , be no tsy ho lasa sesitany fa SESIPASANA!!!
Maso solony maso, ary ny fitsarambahoaka no atao fa tsy mila fitsarana sy mpitsara gasy zay toy ny fran TAY , MALOTO, BOBOKA SY TSY MENDRIKA NY 60%.
Atao toy ny tany haity, dorana sy potehina daholo ny fitsarana dia aleo atsangana ny fitsarana MARINA SY TSY MITANILA HO AN’NY VAHOAKA SY NY TARANAKA FARAMANDIMBY MALAGASY.
FAHAFAHANA, FIVOARANA ARY FIRAISANKINA.
Miandry ny mpitarika izahay ary raha tsy anao ianareo , vitanay io.
Efatra taona, niseho masoandro tsikelikely daholo ireo tsy « MANJARY » …
» Ao dia ao tokoa hoy izy ny tsy fitoviam-pijery amin’ny fomba fitantanana, izay iarahantsika mahita tsara fa manjary ny olona entina indray no mitsikera ny mpitondra »
Inona koa ity ????Tsy azo tsikeraina ny mpitondra ????? Izay no efa nisy hatrizay (1972 ka hatramin’izao) dia mbola izay hatrany no fomba fijery ????
Ho aiza marina ity tolona ??? Mba mila avadika imbetsaka ny lela ry dada fa mifototra @ mpilaza azy eny ihany izy !!!!
Be izay ny lesona fa nandray isika sa tsia ???
PASSEZ VOTRE CHEMIN MESSIEURS LES EMISSAIRES INDELICATS !
La venue prévue du GIC-M conduit conjointement par chissano (SADC)et ramtamne (GPS/UA) avec dans leurs valises la décision de la soit-disant Communauté internatinale fantôme car il est de notoriété publique ,internationale que cette CI ne forme plus un bloc et n’est plus unanime sur les décisions prises par la SADC en ce qui concerne le retrait des trois candidatures aux élections présidentielles à Madagascar..
La SADC et l’Union Africaine se sont comportées dans ce faux problème très artificiel soulevé par chissano,sur des directives de la françafrique ,en justiciers ,loin de la justice de ZORRO !
Et oui , ce qui doit arriver est arrivé :les membres de la Communauté internale ,opposés à ce vedict de ce tribunal fantôme animé par la SADC et l’Union Africaine ont certainement fait savoir haut et fort qu’ils ne veulent être comptés pour du beurre et qu’ils ont leurs mots à dire :Cette décision assymétrique d’interdire des hommes et des femmes , citoyens et citoyennes deleur Pays de prendre part à la direction des affaires de leur Pays ne relève pas de la Communauté Internationale ,mais des électeurs Malgaches ,qui lors du suffrage universel libre , démocratique , transparent et crédible , choisirons la candidate ou le candidat qu’ils jugent méritant(e) capable de gérer démocratiquement ,constitutionnellement le Pays et de mener de front la reconstruction du et le développement du Pays et d’édifier le Peuple Malgache dans tous les domaines où s’émancipe l’Etre humain!
La visite -éclair des émissaires de la SADC et du GIC-M et la non délivrance des fameuses sanctions témoignent bien de l’éxigence de ces Pays opposés à la décision de la SADC et de l’Union Africaine
d’annuler cette interdiction de se présenter aux élections pour un motif futile , injustifiable..
Ces choses ont certainement été dites en d’autres formes ,mais le fond et l’esprit y sont bien nets et clairs..
Suivons l’évolution de ce feu follet qui a brûle entre les mains des justiciers qui sont rentrés bredouille , mais qui ont empché leurs indemnités de mission et de découcher..(quand on ne dort pas chez soi ,cela s’appelle découcher et cela se monnaie !)
Je voudrai bien savoir où en est l’initiative de la FFKM dirigée par zanakolona qui a entretenu les feux du coup d’état et a même assisté » en grande pompe » à la .finalisation de ce coup d’état le 17 mars 2009..Comment peut-on croire un instantqu’un tel homme pieds et mains liés avec les auteurs du coup d’état participe à la recherche de solution de sortie de crise et comment expliquer que cette initiative mort-née ait soulevé n enthousiasme chez les Malgaches qui me semblent avoi été abusés et bernés par le verbiage de cet ecclésiatique membre de l’association de malfaiteurs de rajoelina et proche de la françafrique !
Ne Nous laissons pas entrainés par des « zélés « de la soit-disante reconciliation , une sorte d’anesthésie pour nous endormir et Nous faire oublier l’essentiel : la mise en oeuvre de la feuille de route intégrale et de l’instauration de la transition consensuelle , inclusive et obligatoire pour la préparation de l’élection présidentielle ,qui permet le retour de l’encore Président de la République de Madagascar RAVALOMANANA MARC et du maintien de la candidaturede Madame RAVALOMANANA LALAO pour l’élection présidentielle
En ce qui Nous concerne ,tout est clair
-Ce ne sont ni nos harangues ni nos palabres , ni nos rengaines (dridran’INGILO ,ny eo ihany no averimberina !) n’ont aucune prise ni influence sur les débats souterrains , diplomatiques qui se passent sans Nous et même les chissano et les ramtamne ont l’air largués car , eux aussi , rament et ne suivent plus rien.Pour eux qui croire ,la SADC et l’Union Africaine ,la France qui leur donnent des ordres de faire ceci et les autres qui leur téléphone ,leur envoient des sms de faire cela..par exemple..
Et Nous avons les conséquences de cette lutte interne à la Communauté Internationale !
POUR LA CAUSE ,POUR LES INTERETS SUPERIEURS DES MALGACHES ,QUE LES MEILLEURS ?LES PLUS RICHES GAGNENT CAR CEUX-CI NE MEGOTERONT PAR ET SUR LA RECONNAISSANCE DE L’ETAT MALGACHE APRES L’ELECTION PRESIDENTIELLE ET SURTOUT SUR LES AIDES FINANCIERES ET TECHNIQUES POUR LA RECONSTRUCTION DU PAYS DETRUIT PAR LES PUTSCHISTES ET LE DEVELOPPEMENT DU PAYS ET POUR L’AMELIORATION DU BIEN-ETRE PHYSIQUE ,MENTAL DES MALGACHES
l’ARGUMENT DE LA SADC ET DE L’UNION AFRICAINE SUR LA NON RECONNAISSANCE EN REFUSANT DE RETIRER LA CANDIDATURE DE NENY RAVALOMANANA LALAO..EST UN PEU CUCU ET INFANTILE ET SEMBLE PRENDRE DU PLOMD DANS L’AILE.
rajoelina ,sur pression de la SADC probablement ,qui elle subie la pression de cette partie « dissidente » de la communauté internationale ,applique la loi d’amnistie datée d’un an au moins..Il a fait libéré ces ayant-droit à l’amnistie car lui rajoelina a tout perdu ! !
Messieurs les culoté passez votre chemin ! vous avez perdu..et votre tête et votre dignité et votre honneur si vous en aviez !
IL appartient à Noos MALGACHES d’ici, d’ailleurs et de partout de prendre à bras-le-cours notre Pays et son avenir avec fermeté , courage !
Hoy izy hoe :90% ny azy dia 10% kosa ho an’ny vahoaka malagasy
Marina ve izany ? ny GTT international nahavita be koa.
Ô ry vahoaka malagasy ! mba miangavy re Tompoko, aoka isika mba handray adidy sao dia hanenina tongotra aman-tanana. tadidio fa tsy hamono, na hangalatra fa hangataka ary tsy anireo mafia na dj & co ny firenena malagasy fa an’ny VAHOAKA MALAGASY.
Efa tamin’ny 2009 aho no niteny, samia manidy trano, dia mitokona an-dalambe, tsy miteny tsy mivolana, miakanjo fotsy na mainty, mitondra saina maintso fotsy mena.
DIA SAROTRA VE IZANY ???????????????????
Ilay malagasy sady be raikiraiky, no mazan-doha kanefa mora rebirebena.
Taloha anie hoe tsy taitra tsy maika nefa tsy tara Ramalagasy izao efa paika sy raitra ary dolara.Efa ela koa izahay no niteny ohatraohatran’io tenenin’i Elas io dia akatso koa ny asam-panjakana isan’ambaratongany.Ny fivoriana nataon’ny GTT tamin’ny 29 Jona dia namporisika antsika Malagasy hitokona arak’io voalazan’ny filoha io.Efa nambaranay izany teto.Ny any amin’ny faritra efa betsaka ny miandry top sahala amin’i Antsirabe.
8 septembre 2013 à 22 h 28 min
COMBATTONS-NOUS ENERGIQUEMENT ET REFUSONS FAROUCHEMENT CETTE TENTATIVE DE NOUS EMPECHER DE VOTER NOTRE CANDIDATE MADAME RAVALOMANANA RAKOTONIRAINY LALAO !
Un lièvre habitué à gambader aimant voir les jeunes filles court-vêtues se trémousser les derrières au rythme des musiques endiablées, a quitté espaces de débauche ,de prostitution , qui l’ont envouté , pour aller faire valser les politiques qu’il a toujours enviés :il s’est amusé à incendier des entreprises de transformaton agro-alimentares , des magasins de stockage des produits finis , des camions ayant servi à distribuer dans l’Ile les produits de ces entreprises.
Oui ce grisé par les feuilles de rongony et avec l’ego enflé par l’appui de ses commanditaires lors de cette mission macabre .Il a été heureux de voir les « possédants » s’affoler de perdre leurs biens., leurs emplois ,leurs vies car il y a eu des emloyés homme et femmes qui ont été grillés dans les incendies.Il: est aux anges car ses pauvres voyous à lui ont participé à ces saccages, les pauvres contre les possédants..
Mais le lièvre , dans son délire , a nommé ses pauvres dont la plupart ne savent ni lire ni écrire ,comme députés et sénateurs ,car il sait les faire » danser et chanter » avec des pièces sonnantese trébuchantes Tous ces brigands sont capables de voter des décisions du lièvre-roi pour changer de façon tragique,sur directives de la françafrique ,la vie tranquille d’un Peulple dans cette atmosphère où l’humain n’ a vécu de telles catastrophes que personne n’ a été prête pour subir un tel affront et de respirer cet air lourd , pollué , nauséabond , dans cet espace de privations de logements , de repas , de vêtements ,d’école , de soins !
Ce pouvoir usurpé a tenu plus de quatre ans grâce aux soutiens des éléments des forces armées et de la police et des conseils et drectives de la france à fric..
Certes il y a encore des possédants , qui plaignent ces malheureux ,mais qui ne font que plaindre sans éprouveraucune compassion ni commisération pour les pauvres!
Et voilà que durant quatre et plus 20 millions de Malgaches souffrent des conséquences de la destruction socio -économique du Pays , de la déchirure du fiaraha-monina , de la banqueroute de l’Etat dont les entrées ( impôts , taxes , aides internationales ..) ont été détournées avec le produit des divers trafics ( bois précieux , pierres précieuses et même des terrains agricoles ,peut-être pétolifères ou bourrés de minérais !
En cette période grise et ,trouble et poignante de notre vie collective et de notre avenir sombre ,j’ai commis ce survol et cette vue d’ensemble de cette triste aventure artificielle indépendante de notre volonté..
Et que la naïveté ,voire la vanité du lièvre que des étrangers envieux de notre Pays et de ses richesses , de sa position géo-stratégique ont instrumentalisée pour nous berner ,oui que ce lièvre finisse son aventure dans le bordel d’où des étrangers l ‘ont extrait pour éxécuter les basses oeuvres avec son association de malfaiteurs qui éxigent le droit de se porter candidats contre la rigueur des Accords de COTONOU .que la République de Madagascar a signée
NB : J’ai écrit ce survol voici quinze jours et ,comme pour tous les Malgaches , ie discours du Président de la République RAVALOMANANA MARC du 07 août 2013 Nous conforte ,Nous refai revivre et Nous encourage..Il y a des suites essentielles qui Nous attendent impatiement !
N’HESITONS PAS ! GO..
9 septembre 2013 à 7 h 26 min
Fetison ou lE Gal Ratrimoarivony.
IL N’EXISTE AUCUN MAL , AUCUN MALHEUR , AUCUN DEPLAISIR A NOUS RETROUVER FACE A FACE ET MAIN DANS LA MAIN DANS LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE N0TRE SOUVERAINET ET DE TOUS NOS INTEREETS
NOUS DSOMMES ES RICHES… ENCORE PAUVRES
Et pourquoi tant de Pays se battent jusu’à ignoer la souveraineté des , jusqu’à faire de leur existence physique et morale , pour devenir « le patron ,le proriétaire des richesses malgaches « ..
Et la teneur essentielle du discours du Président de la République RAVALOMANANA MARC a insisté sur l’organisation d’élections présidentielles et législatives libres , sans pression internationale ou de n’importe quelle organisation régionale , loco-régionale ou d’un pays quelconque ,afin que le suffrage niversel libre ,démocrataique et transparent pisse choisir le candidat ou la candidate capable ,digne , crédible , fiable ,méritant(e) de diriger le grand combat de renconstruction et de développement de
Zao ve vao hihetsika?? nga tsy nisy niasa saina mihitsy le tolona tao @magro?? Ny fotoana fotsiny ve no very tao??? 4 taona?? hihihi… Toa ohatrin blabla foana isan’andro izao nandritra ny 4 taona nefa tsisy nihaino??? Mahereza eh….
SURVOL DES TENTATIVES DE REPRISES EN MAIN PAR LA FRAN0AFRIQUE DE MADAGASCAR..
Durant ces cinquante trois ans d’ibdépendance ,deux périodes d’apaisement
Précédent Article précédent : RAKOTOAMBOA JENA LOUIS : TADIAVIN’NY SASANY HO ENTINA ANY AN-KADY ITY FIRENENA ITY
Suivant Article suivant : HILARION RARISON : HANATITRA TARATASY ENY AMIN’IREO AMBASADAORO VAHINY MIASA SY MONINA ETO MADAGASIKARA